बलिउड - Forseenetwork : Nepalko entertainment web site : nepali cinema & Gossip : nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : nepali art ,music , manoranjan & more
शिल्पाको पीडा भन्छिन्, पाँच महिना घरबाट बाहिर निस्किईन
अभिनेत्री करीना कपूर आमा बन्ने क्रममा पहिलेको तुलनामा निकै मोटाईन् । हाल उनी त्यहि मोटोपनलाई कम गर्न र शरीरलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउने प्रयासमा छिन् । करीना कपूर बलिउड..
बाहुबलीमा शाहरुख नहुने प्रभास र राणाको पुष्टि हसीनामा श्रद्धाको चार अवतार– आजको बलिउड अपडेट
अभिनेता शाहरुख खान सिनेमा बाहुबली–२ मा क्यामियोको रोलमा हुने खबर केही दिन अघि सार्वजनिक भएको थियो । तर बाहुबली २ का मुख्य कलाकार प्रभास र राणा दग्गुबत्तिले यो खबर गलत भ..
रिलिजमा ढिलाई हुँदा चुर्लुम्म डुबेका १७ बलिउड फिल्म
रणवीर कपूर र कटरिनाक कैफ स्टारर सिनेमा जग्गा जासुस एक पटक फेरि डिले भएको छ । २०१७ को अगस्टमा रिलिज हुने भनिएको सिनेमाको रिलिज डेट फेरि पर सकेको छ । २०१४ को मार्च महिना ..
शाहरुखसँग काम गर्ने दीपिकाको चाहना, कोरियन फिल्ममा सलमान–आजको बलिउड अपडेट
अभिनेत्री दीपिका पादुकोण फेरि शाहरुख खानसँग काम गर्ने मुडमा छिन् । शाहरुख खानकै सिनेमा ओम शान्ती ओमबाट बलिउडमा ब्रेक लिएकी उनले त्यसपछि चेन्नई एक्सप्रेश र ह्याप्पी न्यु..
भ्यालेन्टाईन डे को दिन टुट्यो यी सुन्दर गायिकाको ईन्गेजमेन्ट
पाकिस्तानी गायिका मोमिना मुस्तेहसनको ईन्गेजमेन्ट टुटेको छ । भ्यालेन्टाईन डे को दिनमा उनले आफ्नो ईन्गेजमेन्ट टुटेको जानकारी सामाजिक सञ्जालबाट दिएकी हुन् । उनले दुवै परिव..
यसरी भएको थियो जीनसँग प्रितीको भेट
बलिउडकी डिम्पल गर्ल प्रिती जिंटाले प्रेम दीवसको अवसर पारेर श्रीमान् जीन गुड ईनफसँग भेट भएको पल सेयर गरेकी छिन् । यी दुईको प्रेम कहानी कुनै सिनेमाको प्रेम कहानी भन्दा कम..
रेलवे प्रोपर्टीमा नोक्सान पुर्याएको भन्दै शाहरुख विरुद्ध उजुरी दर्ता
सिनेमा रईसको प्रमोशनका क्रममा रेलवे प्रोपर्टीलाई नोक्सान पुर्याएको भन्दै अभिनेता शाहरुख खान विरुद्ध उजुरी परेको छ । रेलवे अदालतको अर्डर अनुसार यो उजुरी दर्ता भएको जानकारी छ । शाहरुख खानले सिनेमा रईसको प्रमोशनको समयमा मुम्बई देखि दिल्लीम्म रेल यात्रा गरेका थिए । यो क्रममा उनी बीच बीचमा बिभिन्न स्टेशनहरुमा रोकिन्थे । बिभिन्न स्टेश..
एमीको मोबाईल ह्याक हुँदा व्यक्तिगत तस्वीरहरु लिक !
अभिनेत्री एमी ज्याक्शनको मोबाईल ह्याक भएर उनका केही तस्वीरहरु अनलाईन लिक भएका छन् । केही दिन अघि मुम्बईबाट चेन्नई जानको लागि कनेक्टिङ फ्लाईटमा भएकी उनी केही समय मोबाईल शपमा रोकिएकी थिईन् । त्यहि समय उनको मोबाईल ह्याक भएर उनका तस्वीरहरु लिक भएका थिए । हालै मात्र एक चर्चित अनलाईनसँग कुराकानी गर्दै उनले आफ्ना तस्वीरहरु लिक [&helli..
‘बाहुबली-२’ मा शाहरुख ! ‘जोली एल बी-२’ को कमाई बढ्दो-आजको बलिउड अपडेट
अभिनेता शाहरुख खान सिनेमा ‘बाहुबली–२’ मा क्यामियो भूमिकामा देखा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । शाहरुखलाई क्यामियोमा देखाउनको लागि निर्देशक एस एस राजमौली लागीपरेका छन् । अब शाहरुखले हुन्छ भने भने दर्शकले उनलाई ‘बाहुबली–२’ मा देख्न पाउनेछन् । यो सिनेमा २८ अप्रिलमा रिलिज हुने तयारीमा छ । अभिनेत्री एमी ज्याक्शन, अक्षय कुमार र रजनीक..
करीनाका छोराको तस्वीर भाईरल, हेर्नुहोस् त कति क्युट छन्
अभिनेत्री करीना कपूर खानका छोरा तैमुर अलि खानको एक तस्वीर भाईरल भएको छ जसमा तैमुरको अनुहार स्पष्ट देखिन्छ । तैमर जन्मेकै समय देखि नामका कारण चर्चामा छन् । हालै मात्र सेफ अलि खानले उनको यो तस्वीर आफ्नो ह्वाट्स ऐपको डिस्प्ले राखेका थिए । त्यसपछि तैमुरको क्युट अनुहार सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भएको हो । केही समय […]
१ सय ८२ पटक मरिसके यी अभिनेता,पानीमा डुबेर पनि झण्डै गुमाएका थिए ज्यान
दक्षिण भारतीय तथा बलिउड सिनेमाका भिलेन आशिष विद्यार्थीले राष्ट्रिय अवार्ड जितिसकेका छन् । उनले बलिउड सिनेमा द्रोहकलमा काम गरेर बेस्ट सपोर्टिङ क्याटगोरीमा राष्ट्रिय अवार्ड जितेका हुन् । उनले पाएका अन्य अवार्डहरु आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् । सिनेमामा प्राय भिलेनको भूमिका निभाउने उनी अहिलेसम्म १ सय ८२ पटक मरिसकेका छन् । प्राय सबै सिनेमाक..
वर्षको दोस्रो बिगेस्ट ओपनर बन्यो ‘जोली एल एल बी–२’ कटरिनाका बहिनीहरुलाई सलमानले लन्च गर्ने–आजको बलिउड अपडेट
अक्षय कुमार अभिनित सिनेमा ‘जोली एल एल बी–२’ ले सुरुवाती दिनदेखि नै धमाकेदार कमाई गरेको छ । पहिलो दिन १३ करोड २ लाखको कारोबार गरेको सिनेमाले दोस्रो दिन शनिबार १७ करोड ३१ लाखको कारोबार गरेको छ । यो सिनेमा यो वर्षको दोस्रो बिगेस्ट ओपनर बनेको छ । यो भन्दा पहिले पहिलो स्थानमा शाहरुखको रईस र […]
करिश्माका प्रेमी डिभोर्स लिँदै, के करिश्मालाई विहे गर्लान् ?
अभिनेत्री करिश्मा कपूर श्रीमान् संजय कपूरसँग अलग भएपछि व्यापारी संदीप तोशनीवालसँग अफेयरमा छिन् । उनीहरु धेरै पटक एकसाथ देखिएका छन् जसले उनीहरु अफेयरमा भएको पुष्टि गर्छ । करिश्मासँग नजिक भएका संदीले श्रीमतीलाई डिभोर्स दिन लागेको खबर आएको छ । उनले श्रीमती मानसिक रोगी भएको भन्दै अदालतमा डिभोर्स फाईल दर्ता गराएका छन् । दुई छोरीका पि..
जब निर्माताले प्रियंकाको नाक नराम्रो भने
अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले हालै मात्र चर्चित अमेरिकी शो ‘द भ्यु’ मा सहभागिता जनाईन् । उनले यस कार्यक्रममा आफ्ना जीवनका केही नखुलेका रहस्यहरु खोलेकी छिन् । जब प्रियंकाले मिस वल्र्ड भएर अभिनयको सुरुवात गरिन् त्यसबखत आफ्नो शरीरको बनावटका कारण आलोचित बनिन् । अभिनयको सुरुवातमा उनी निर्माताकहाँ जाँदा मजाकको पात्र बन्ने गर्थिन् । । निर..
आमिर र शाहरुखले २५ वर्षे यात्रामा पहिलो पटक सँगै तस्वीर खिचे
अभिनेता शाहरुख खान र आमिर खानले २५ वर्षे सम्बन्धमा पहिलो पटक एक साथ तस्वीर खिचेका छन् । उनीहरुले शुक्रबार राती मुम्बईको पी भी आर फाउण्डर तथा व्यापारी अजय बिजलीको जन्मदिन पार्टीमा एक साथ तस्वीर खिचेका हुन् । उक्त तस्वीर सामािजक सञ्जालमा सेयर गर्दै शाहरुख खानले लेखेका छन्, ‘एक अर्कालाई चिनेको २५ वर्ष भयो तर एक […]